Naya Post Nepal | भिडियो वि’वादपछि प्रकाशले लेखे स्टाटस, अब के गर्लान माओवादी नेताहरु
भिडियो वि’वादपछि प्रकाशले लेखे स्टाटस, अब के गर्लान माओवादी नेताहरु
काठमाडौ । गायक तथा गीतकार प्रकाश सपुतले भर्खर सार्वजनिक गरेको गीतले अहिले माओवादी केन्द्रमा भु’इ चालो गएको छ । पूर्व माओवादी लडाकुको अवस्थालाई उनले गीतमा चित्रण गरेका छन् । तर गीतको भिडियोमा देखाइएको महिला पात्रको भूमिकालाई लिएरमाओवादी का केही नेताहरुले क’डा आ’पत्ती जनाएका छन् ।
उनलाई युट्युववाट भिडियो हटा’उन माग राखेका छन् । त र यसवारे गीतकार तथा गायक प्रकाश सपुतले धा’रणा सा ‘र्वजनिक गरेका छन् । उनले आफुले संगत गरेका साथी र आफुले देखेका नजिकका ब्य’क्तिहरुको वा’स्तविकता नै गी तमा उतारेको ब’ताएका छन् ।
‘वास्तविक पात्र, स्वभाव र सोचको अध्ययन गरेर नै गीत तयार पारिएको छ, उनले भनेका छन् । गायक प्रकाश स पु’तको उक्त गीतबाट सबैभन्दा बढी स’त्तारु’ढ नेकपा मा ओवादी केन्द्र चिढिएको छ । धेरैजसो माओ’वा’दी का’र्य कर्ता गीतवि’रुद्ध ख’निएका छन् ।
माओवादी केन्द्र स’म्बद्ध चार भातृ संगठनले आइतबार बेलुका संयुक्त वि’ज्ञप्ति जारी गर्दै गीतलाई तत्काल युट्यु बबाट ह’टाउनुपर्ने अडान कायमै राखेका छन् । सोमबार ध’नगढी पुगेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्र’चण्डले भने ‘पीर’ गीतको विषयलाई लिएर धेरै आवेगमा आउनुनपर्ने बताएका छन् ।
पढ्नुहोस् प्रकाश सपुतको स्टाटस्
‘पिर’ प्रतिको शुभेच्छाका लागि तपाईंहरु सबैलाई धेरै-धेरै धन्यबाद ! सवैको अपेक्षा अनुसारको सिर्जना गर्न सम्भव नहुँदो रहेछ। सधैं कसैको मन नबिझाइ सवैको मुटुमा बस्ने सर्जकको चाहना पूरा नहुने रहेछ। त्यसैले मेरो नयाँ गीत ‘पिर’का कारण केही दर्शकस्रोतालाई मर्का परेको मैले मह शुस गरेको छ।
गीतले भन्ने चाहेको कुरा यहाँलाई अवगत भइसकेको छ। एउटा सर्जक भएका नाताले आफ्नो सिर्जनालाई लिएर गरिएका अपेक्षा र टिप्पणीहरुको उपेक्षा गर्न हुन्न भन्ने मला ई महशुस भएको छ। मैले सवै खालका प्रतिक्रिया र टिप्प णी हेरिरहेको छु। यतिबेला आफ्नै सिर्जना तपाईंहरुका न जरबाट नियालिरहेको छु। मैले गल्ती गरेको हो कि ? तपा ईंहरु (केही)ले गलत बुझ्नुभएको हो, समिक्षा गर्दैछु।
‘पिर’बाट मैले युद्धकै जग/ बलमा व्यवस्था परिवर्तन भएको तर अवस्था परिवर्तन नभएको भन्न मात्रै खोजेको हौं।
समानताको लागि एकसाथ लडेका कमरेडहरु बिचमा ब ढ्दै गएको असमान दूरी देखाउन खोजेको हौं। एक आ मनागरिकले राज्यसँग गरेको अपेक्षा र पाएको उपेक्षालाई चित्रण गर्ने कोशिस गरेको हौं! मलाई लागेको – यत्तिको विषय त हामीले टेलिभिजन कार्यक्रमहरुमा हेर्दै आएको होइन र? पत्रपत्रिकाहरुमा त्यसबारे लेखिदै / पढिँदै आए को होइन र? छ’र्लङ्गै देखिएको विषय होइन र? स्वी’कारिए ‘को विषय होइन र?
जसरी यसअघिका गीतहरु ‘बोल माया’, ‘दोहोरी ब्याटल’, ‘गल्बन्दी’, ‘बदला बरिलै’, ‘फुटेका चुरा’ , ‘मेरो पनि हैन र यो देश’ , ‘कुरा बुझ्न पर्छ ‘ गीतहरुमा कथा बुन्थें, पात्र बना उथें , टुक्का टिप्थे, लय हाल्थे र रेकर्ड / छायाङकन गर्थें । यसमा पनि त्यही प्रक्रिया छ ।्गीतको पृष्ठभूमिका बारे मा केही अवगत गराउन चाहन्छु। ६ वर्ष अगाडि करिब ४ वर्ष दोहोरी साँझमा काम गर्दा गाउने/बजाउने/ पकाउने/ पस्कने मध्यका थुप्रै सहकर्मीहरु पुर्व लडाकु थिए। उनीहरु चरम निराशाबादी कुरा गर्थे। त्यो समयमा नै मैले यो विषय डायरीमा नोट गरेको थिएँ। संयोगले अहिले निस्क्यो। यस बाहेक कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह, नियत र उद्देश्य नराखिए को स्पस्ट पार्न चाहन्छु। प्रतीकात्मक रुपमा दृष्यहरु निर्मा ण गरेर बनाएको एउटा कमरेडको कथा हो ‘पिर’। यो बि चमा मैले यस्ता पात्रहरुको अवस्था, स्वभाव, सोचको अध्य यन गरें। केही पात्रहरुसँग भे’टेर कुराकानी पनि गरें। केहि पात्रहरु पढें । आम मानिसका भोगाई र संवेदनाहरु बुने र भिडियो ब’नाएँ। मेरो पेशा र पहिचान यहि हो।
एउटै गीतमा सबै दृ’ष्टिको’ण अटाउन सकिदैन। पूरै बुझाइ आउँदैन। त्यसैले अर्को गीतमा अर्को कथा भन्नु त छँदैछ, त्यसमा अर्कै दृ’ष्टिको’ण समेटौला। अहिले अलि धेरै को’ ट्याएर हेरिएको एउटा दृष्य छ, त्यो आत्म’सम्मानसँग जो डिएको प्रतीकात्मक दृ’ष्य हो । प्र’तिकात्म’क रुपमा राखि एका यस्ता दृष्यहरुले कसैको आत्मसम्मानमा अ’सर पुग्न गएको छ भने म फेरि आ’त्मालो’चना गर्छु । यद्यपि मैले भि डियोको सुरुमा यो कुरा लेखेको पनि छु। मा’फि मागेको छु ।
अब यस्ता पात्रहरु छन् वा छैनन् भ’न्नेतर्फ नजाउँ । त्यसो हो भने मुना / मदन छन् कि छैनन्? सुम्निमा र सो’मदत्त खोज्न कहाँ जाने ? सुयोगबिर र स’कम्बरी कहाँ होलान ? कहाँ होला घु्म्ने मेच माथि बसेको अ’न्धो मान्छे ? खैर, भिडियोलाई फेरि एकपटक अ़’क्षरस हेर्ने हो भने व्यवस्था परिवर्तनमा माओवादी यु’द्ध र आन्दोलनलाई कहीँनेर पनि गलत अर्थ्याइएको छैन। बरु भएभरका प’रिवर्तनको जस दिइएको छ ।
भिडियोमा देखिएका पात्रहरु जस्तैको बलिदानीले पाएको यो नयाँ व्यव’स्थामा मैले यति धेरै फाइदा उठाएको छु भने उनीहरुको अवस्थाको गीत किन नगाउने भन्ने हो। अब भि डियो नै हटाउँदा पो यु’ध्द / आन्दोलन / गणतन्त्र / स्वतन्त्र ताको अप’मान हुने हो कि? म अत्यन्त अन्तरमुखि र शान्त मनुवा हुँ । म सर्जक हुँ, सिर्जना नै मेरो बिचार हो ! आवाज हो । विवाद मेरो स्वभाव र ल्याकतको कुरा होईन ! मैले क ससँग पनि यो विषयमा सहयोग/ सल्लाह लिएको छैन ! त्यसैले सिर्जना र स्वतन्त्रताको कुरा त गरौं तर यसलाई राजनीतिकरण नगर्न सबैसँग अ’नुरो’ध गर्दछु !
मैले आफ्नो स्वतन्त्रताको आनन्द लिइरहेको छु ! मेरो विन म्र अनुरोध मलाई कुनै कि’त्तामा नउभ्याइदिनु होला ! कुनै विषय जब विवादित बन्छ, त्यो बनेको बन्यै गर्छ । पक्ष /वि पक्षमा एकोहोरो भइन्छ ! नेपाली सोसियल मिडियामा यो गलत नजिर स्थापित भएको छ ! वि’वाद’ले मानसिक तना व त दिन्छ नै वि’षयान्तर पनि गर्छ। गीत र भिडियोको भा षा, शैली, प्रस्तुतिलाई कलाका दृ’ष्टिबाट, विचारका दृष्टि बाट हेरौं, समिक्षा गरौ ! तर गीतले उठाउन खोजेको मुख्य विषयहरुलाई एकपटक इमान्दार भएर विचार गरौं। समग्र विषय त सत्य हो भन्दै नेतृत्व पंक्तिले स्वि”कारिस’क्नु भए को छ ! त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ केही कदम उठा’इयो भने मेरो सिर्जनाले सा’र्थक’ता पाउने थियो।
भिडियो हेरिरहँदा जुन–जुन दृष्यले सन्बन्धित साथीहरुलाई आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ, त्यस प्रति म फेरी पनि क्ष मा चाहन्छु ! यसलाई कलाको दुष्टिकोणले हेर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ! कसैले नियतवस उक्साएर वा कसैले निरन्तर नि रुत्साहित गरेर एउटा सर्जकलाई दु’विधामा नपारौ ! न अल्झा उँ ! किनकि समाजमा टिप्नुपर्ने कैयौं कथा छन ! गाउनुपर्ने कयौं, गित छन् ! तपाईंले नै लडेर ल्याएको नयाँ व्यवस्थामा पनि सोध्नुपर्ने कैयौं प्रश्नहरु छन्। प्रश्नहरुलाई निरुत्साहित नगरिदिनुहोस्।
२०७८ फाल्गुन ३०, सोमबार प्रकाशित 1 Minute 208 Views